» आयोजना सम्पन्न हुँदै आएका छन् !अहिले लोडसेडिङको डर मान्नु पर्दैन,! हितेन्द्रदेव शाक्य ,तालि या गाली ?हेर्नुहोस यो छोटो सम्वाद, आयोजना सम्पन्न हुँदै आएका छन् !अहिले लोडसेडिङको डर मान्नु पर्दैन,! हितेन्द्रदेव शाक्य ,तालि या गाली ?हेर्नुहोस यो छोटो सम्वाद, – हाम्रो खबर
आयोजना सम्पन्न हुँदै आएका छन् !अहिले लोडसेडिङको डर मान्नु पर्दैन,! हितेन्द्रदेव शाक्य ,तालि या गाली ?हेर्नुहोस यो छोटो सम्वाद,
काठमाण्डाै – नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ भनेर सरकारले भन्दै आएको र नागरिकले अपेक्षा गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । सरकारको वाचा र नागरिकको अपेक्षालाई निरास बनाउने गरी भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
ऊर्जाका अनेक माध्यममा बिजुली नै सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो र वातावरणमैत्री हो । तपाइँले खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । लुगा धुन, खाना पकाउन र अन्य घरायसी प्रयोजनको लागि पनि बिजुली नै प्रयोग गर्नुहोस् । जतिक्यो धेरै बिजुली प्रयोग गर्न मेरो आग्रह छ । प्राविधिक कारणले केहीबेरको लागि बत्ती गएमा धैर्य राखि दिनुहोला । उज्यालो बाट